Somaliland: Madax-dhaqameed Ka Hadlay Qaadhaan Siyaasadaysan Oo Guddida Wadada DIGAALE Ay Ugu Madax Buuxiyeen Guddoomiye Cirro - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madax-dhaqameed Ka Hadlay Qaadhaan Siyaasadaysan Oo Guddida Wadada DIGAALE Ay Ugu...
“Waxaanu Leennahay Waxtar Uma Aragno Labada Gambo Ee Kor Loo Hayo, ee Dhismaha Wadada Digaale hala Daayo Siyaasadaynta”.
Madax dhaqameed ka soo jeeda degmada Maxamed Mooge ee Magaallada Hargeysa ayaa naqdiyey dhawaaqyo ka soo yeedhay Xubno ka mid ah deegaanka oo ay sheegeen in ay siyaasadaysan yihiin isla markaana xisbiga WADDANi Dabada ka riixayo.
“Waxaan doonaynaa inaanu ka hadalno hadal aanu shalay [dorraad] ka maqlaynay cuqaasha Yoonis (Ciidagale) oo ahaa in qaadhaan ay ummaddu bixisay oo loo ururinayay dhismaha wadada digaale ee isku xidhaysa Xaafadda Maxamed Mooge iyo xaafadda Masallaha uu nin caaqil ahi u hibeeyey inan aan weligii xaafadda arag oo uu yidhi isaga yaa bixiyay. Sidaasi darteed waxaanu doonaynaa inaanu halkan ka cadayno inaan qaadhaankaasi cid gaar ahi lahayn ee dad badani ka qayb qaateen” sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah cuqaasha iyo odayaasha beesha uu ka soo jeedo suldaan Axmed Cadda-gude oo maalintii Arbacadii ka guddoomay qaadhaan saddex kun oo dollar guddoomiyaha xisbiga WADDANi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo isaga iyo saraakiil kale oo xisbigaasi kamid ahi socdaal ku tageen dhismaha waddadaasi digaale.
Suldaan axmed Cismaan caddagude oo kamid ah madax dhaqameedka reer Somaliland gaar ahaanna beesha Yoonis ee Beellaha Ciidagale oo guddoomiye cirro iyo masuuliyiintiisa kus oo dhaweeyey indho indhaynta waddadaas, waxaana isaga iyo Caaqil Xasan Ibaahin Xuseen oo ah guddoomiyaha dhismaha wadadaasi ay halkaasi ka sheegeen mahad naq ay guddoomiye cirro ugaga mahad naqeen kormeerkiisa iyo qaadhaanka uu kaga qaybgalayo dhismaheeda oo ay ka guddoomeen.
“Sharaf bay noo tahay inaanu guddoomiye kugu soo dhawayno degmada Maxamed Mooge oo ay waddadan oo shan kiilloo mitir iyo badh dhererkeedu yahay dhex marayso”.
Sidaasi waxaa yidhi Caaqil Xasan Ibraahin Xuseen (Xasan Dheere) oo ah guddoomiyaha dhismaha wadadan, waxaana isaga oo hadalkiisa si wata uu intaa ku daray in ay guddi ahaan mucaarid u aqoonsan yihiin ciddii wadadan kala qayb gali wayda dhismaheeda,
“waxaa annaga mucaarid noo ah ciddii wax ku tari wayda wadadan. Ciddii wax ku tarta wadadu waa Muxaafid WADDANi ah. waxaanan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha wadani inuu isagu maanta hormuud ka yahay waxqabadka dalka ka socda” Sidaas ayuu dhahay Caaqil Xasan Ibraahin.
Waxa isna halkaasi ka hadlay Suldaan cadda gude oo kamida odyaashas xaafada waxaana uu ka dhawaajiyay inay ku faraxsan yihiin ka degmo ahaa inuu gudoomiye cirro qadarkan lacagta ah ku deeqo wadadaas, sidoo kalena waxa uu ugu baaqay dadwaynaha degan xaafada inay codkooda siiyaan gudoomiye Cirro waxaana uu yidhi.
“marka hore waxaan u mahadnaqayaa gudida wadadan digaale oo dadaal badan u galay sidii ay dhisi lahaayeen wadadan, Mudane gudoomiye aad baad ugu mahadsan tahay imaanshiyahag, wadadan hada waxay dhisan tahay (500M),sidii hore loo sheegayna waxay isku xidhaysaa degmooyinka hore loo sheegay, waxaan leeyahay dadwaynaha xaafada maanta waxa idin yimi masuuliyiintii xisbiga wadani oo diyaar idiin ah inuu wax idiin sameeyo, hawshan uu hada cirro qabtayna waxaa masuuliyadeed lahaa oo ahayd inay dhisaan dawlada laakin may garan markaa bulshada degmadaa Maxamed Mooge waxaan leeyahay balanteenu ha noqoto maalinta codbixinta in aynu codkeena siinoo Xisbiga wadani oo waxyaalo badan inoo qabtay Saw sidaa maaha”Sidaas ayuu hadalkiisa isna kuso koobay Suldaan Cadde Gude.
Jawaabta Madax dhaqameedka
Haddaba Madax dhaqameed ka soo jeeda Xaafadda Maxamed Mooge ee Wadadani dhex marayso ayaa shir jaraaid oo ay shalay magaallada Hargeysa ku qabteen ku cambaareeyey socdaalka guddoomiye cirro ku tegey wadadaas iyo qaadhaanka uu kaga qayb galay dhismaheeda oo ay sheegeen in uu yahay mid siyaasadi ku ladhan tahay.
Sidoo kale waxaa ay xaal ka bixiyeen hadallada Suldaan Cadda gudde iyo guddoomiyaha wadada ka soo yeedhay. Si gaar ah waxaa ay u dhaliileen guddoomiyaha Xisbiga WADDANi oo ay sheegeen in tan iyo markii la bilaabay wadadan ay maanta ugu horeyso aragiisa
“waxaanu leennahay Cirro maanta ayaanu aragnay, labada gambo ee uu bixinayana inuu kor u qaado maaha waayo rag baa wax ka badan bixiyey oo aan ciddina maqal, waxna sheegan, kuwaasi ayaanu wax tar u arkaynaa laakiin gambo kor loo hayo waxtar u arki mayno, waxaana leeyahay wadadii waad xidhaysaan ee dadka ha ka xidhina dhismaheeda, hana laga daayo siyaasadaynta wadada la siyaasadaynayo”.
Mid kale oo kamid ah madax dhaqameedka goobtaasi ka hadlay ayaa isna sheegay in aanay haboonayn in Xisbiga WADDANI lagu soo koobo mahad naqa ciddii qaadhaanka ku darsatay wadada Digaale dhismaheeda
“Maaha xisbiga WADDANI oo saddex kun oo dollar bixiyey in lagu soo koobo mahad naqa oo la yidhaahdo WADDANNI Mooyee cid kale oo wax bixisay ma jirto, taasna waxanau u arkaynaa in la xannibay hab sami u socodkii wadada. Mana ahaa maalin inan la taga saddex kun. Waxaanan Leeyahay Cirro guddoomiye siyaasad ayaad galisay waddadii ay dawladdu wax nagaga taraysayay” .